Onenhliziyo ephayo usephosa esivivaneni ngenhlangano ethi yena
UMSUNGULI wenhlangano engenzi nzuzo esiza abahlwempu, Umthandazo Family Foundation, uNkk Nomthandazo Buthelezi Isithombe: BONGIWE ZUMA
Bongiwe Zuma | March 6, 2022
UKUHLALA ecwiya imali yegilosa yasekhaya ukuze asize abaswele ngasese, kwenze umndeni wakhe wamgqugquzela ukuthi asungule inhlangano esiza abantu besifazane abaswele.
UNkk Nomthandazo Buthelezi usanda kwethula ngokusemthethweni inhlangano yakhe engenzi nzuzo Umthandazo Family Foundation, eVryheid.
UNkk Buthelezi unikelele inkulisa yaseMvunyane, eMondlo, ngoR50 000. Uthando lokupha uthe lwafika esemncane ehlala ethatha izinto ekhaya, esiza abantu noma eyothenga igilosa agcine ethengela nakweminye imizi. Isicelimpilo Creche ehlomule ngesamba sikaR50 000 selokhu yasungulwa ngo-2014, ibhekene nezingqinamba kwezezimali.
UNkk Buthelezi osebenzisana nezinhlaka ezahlukene ukusabalalisa uxhaso, uthi bekumkhathaza kakhulu ukubona abantu beswele emphakathini nobekwenza agcine esethatha imali yezidingo zezingane zakhe, asize abanye.
"Ngabe angikho lana ukuba angesekwanga wumndeni wami. UMthandazo Family Foundation kade waba khona, sisebenza. Kade nganginomuzwa wokusiza ngisho enkonzweni, ngiyakholelwa ekusizeni abantu. Ngelinye ilanga umamezala wami waze wangichazela nangobabezala owayebizwa ngombhishobhi wempuphu ngoba wayesiza abantu. Nami ngihamba ezinyathelweni zawo wonke amalungu omndeni wami ngoba nomyeni wami naye usebenzela umphakathi," kusho uNkk Buthelezi.
AbeSicelimpilo, uNkk Phumlile Ntuli noNkk Ntombi Thomo, baveze ukuthi kade baqala bezama ukulondoloza imali kodwa kungahlangani. Ukuthola lolu xhaso bathi kuzoyithuthukisa indawo yokusebenza kwazise baqala besebenzela ekhaya. Bathi umnikelo kaNkk Buthelezi uzoyishintsha impilo.
"Saqala sinezingane eziwu-15, namhlanje sinezingane eziwu-60 ngenxa yothando lomsebenzi. Izingane siyazihlukanisa; ezinye zihlale emnyango kanti ezinye siphoqeleke ukuthi sizihlalise emakhaya uma isimo sezulu singesihle. Besizama uxhaso singalutholi, nesilutholile lweCovid-19, sithenge ngalo umhlaba nezitini zokwakha. Ngoxhaso esilutholile sesizoqhubeka nendlu," kusho uNkk Ntuli.
Akagcinanga lapho, uNkk Buthelezi, uphinde wanikelela nemindeni eswele ewu-40, ngegilosa yokudla. Izikole nazo zihlomulile esandleni sakhe esiphayo. Uphinde wanikelela abafundi ngomfaniswano wesikole.
UNkk Buthelezi uthi isifiso sakhe esikhulu ukuyibona idlondlobala inhlangano yakhe ikwazi ukufinyelela nakwezinye izindawo yize okwamanje isazinze eVryheid.
Ephetha, uthe osomabhizinisi abahlukene abafisa ukufaka isandla nokunikela ngezinto ezahlukene enhlanganweni yakhe, bavumelekile ngoba kuzosizakala imindeni eminingi.